Abakhi bezakhiwo kanye ne-B2B Tweeting | Martech Zone
Abakhi bezakhiwo kanye ne-B2B Tweeting
NgoMsombuluko, Julayi 11, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Labo bantu bezebhizinisi (B2B) abantu abahlali njalo phezulu ezindabeni zocwaningo lokumaketha, kepha njalo ngesikhashana uthola igugu. Yize le-infographic ethize evela ku- UPauley Creative ugxile ocwaningweni lwe-UK Architects, Ngikholwa ukuthi okutholakele kungavula ezinye izinkampani ze-B2B ukubona ukuthi le ndlela ingasiza kanjani inhlangano yabo. Ngokuya ngemiphumela yocwaningo, iningi labakhi lisebenzisa i-Twitter ukuhambisana nezindaba zakamuva zomkhakha kanye nokuxhumana nontanga bezimboni.
Mayelana noPauley Creative:
Ngokusho kwabo iwebhusayithi, UPauley Creative ugxile kwezentengiso zedijithali embonini yezokwakha. Sinolwazi lokwakha amasu wokumaketha edijithali enza kahle futhi alinganiselayo kumakhasimende ethu akha ukuqwashisa ngomkhiqizo futhi aqhube imikhondo yebhizinisi yezinkampani ezihlobene nokwakha.
Iphrofayela nokusetshenziswa kwe-LinkedIn